Kaampiin baqattootaa guddichi Keeniyaatti argamu Dadaab lolaadhaan miidhame - BBC News Afaan Oromoo
Kaampiin baqattootaa guddichi Keeniyaatti argamu Dadaab lolaadhaan miidhame
Image copyright Elias Badhaso
Goodayyaa suuraa Kaampiin Ifoo kanneen daran miidhaman keessaayyu
Kaampiiwwan afur Keeniyaa Dadaabitti argaman keessaa lama gariin, rooba cimaa naannichatti mudateen miidhaan irra ga'uu baqattoonni ni dubbatu.
Akka baqattoonni dubbatanitti, yeroo ammaa kanatti jiraattonni kaampii kunneen keessa jiran bishaan mana jireenyaa isaanii dhuunfachuu isaatiin gara dhaabbilee amantaatti deemuun da'achuuf dirqamanii jiru.
Dargaggoo Eeliyaas Badhaasoo Kaampii Ifoo keessa kan jiraatu yoo ta'u, lolaan kun kan isaan mudate halkan bakka ciisaa turanitti akka ta'e dubbata.
''Sa'aa shan irraa kaasee halkan guutuu roobaa bule, wanta dandeenyuun ofirraa dhorkuuf yaallus bishaanichi guutaa dhufee humna keenyaa ol ta'e'',
''Lolaan mana keessa gales meeshaalee itti fayyadamnu fi nyaata of harkaa qabnu nu harkaa mancaase, nutis humnaa ol gaafa nutti ta'u gara masjiidaa fi bataskaanaatti baqachuuf dirqamne jedha.
Obbo Alemayehu Hordofaas kaampichuma keessa waggoota dheeraaf kan jiraatan yoo ta'u, lolaan kun kan dhufe rooba naannoo Gaarisaatti rooberraa yoo ta'u, yeroo ammaatti da'annoon isaanii bishaaniin guutamuu himu.
Lammiin Eertiraa kan biraa kaampii Dagahalee keessa jiraatu Walda'aab W/Giyoorgiis lolaan kun manneen jireenyaa sadii guutummaatti akka mancaase hima, asiif achi sochoo'uufillee hedduu rakkisaa ta'uu eeruudhaan.
Tumsa Komishinii Olaanaa Dhimmoota Baqattootaa MG
Image copyright Elias Bedhaso
Goodayyaa suuraa Gargaarsa hatattamaa qaqqabsiisuuf bishaan sochoo'uu akka dhorkeen dhaabbileen gargaarsaa himu
Akka baqattoonni jedhanitti, amma yoonaatti qaamni dhufee gargaarsa nuuf taasise tokkollee hin jiru kan jedhudha.
Dubbi himaan 'UNHCR' Kaampii Dadaab Hassadullah Nasrullaah BBC'tti akka himanitti, %30 kaampiiwwan lameen kanaa lolaadhaan kan guutamedha.
Gargaarsa hatattamaa taasisuuf garuu bishaan guddaan naannichatti kuufame sochii dhorkee waan tureef, hojjattoonni dhaabbilee arjoomaa sochoo'anii hojjachuu hin dandeenye.
Haa ta'u malee, amma roobni xiqqaachaa waan jiruuf lakkoofsa namoota miidhamanii adda ba'ee gargaarsi barbaachisu hundi taasifamuuf hojiitti galameera jedhu.
Yeroo ammaa kanatti kaampichi lammiilee Somaaliyaa, Itoophiyaa, Koongoo, Yugaandaa, Ruwaandaa fi Sudaan Kibbaa irraa dhufan 225,000 ol ta'an keessumeessaa jira.
Lammiileen Itoophiyaa 7,000 ol ta'an kaampii Dadaab keessatti baqattummaan jiraatu.